ओलीको राष्ट्रवादको पारो ह्वात्तै बढेको बाबुरामको दाबी ! – " सुलभ खबर "
ओलीको राष्ट्रवादको पारो ह्वात्तै बढेको बाबुरामको दाबी !
काठमाडौं । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन कुशल कुटनीति वा युद्धबाट मात्रै सम्भव भएको बताएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् । भट्टराईले पछिल्ला दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवादको पारो ह्वात्तै बढेको दाबी गर्दै उनले कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउन रोजेको बाटो कुशल कुटनीतिको बाटो हो कि बल प्रयोगको बाटो हो स्पष्ट नभएको बताएका छन् ।
अध्यक्ष भट्टराईले भनेका छन्, ‘सीमा र फौज तैनाथी सम्बन्धी विवादको प्रश्न इतिहासमा सधैं र सबैतिर कि त शान्त र कुशल कुटनीतिको तरिकाले कि त युद्ध र बलप्रयोगको तरिकाले हल हुने गरेको छ । अर्को तेश्रो बाटो छँदैछैन ।’ भट्टराईले राज्यसञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेले यसरी सार्वजनिक रुपमा दन्तबझान गर्नुको अर्थ के भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् ।
यस्तो छ डा बाबुराम भट्टराईको फेसबुक स्ट्याटस:
सुगौली- सन्धीले निर्धारित गरेको महाकाली नदी पूर्वको कालापानी, लिपुलेक,लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग हो र यसमा कुनै विदेशी दावी र हस्तक्षेप स्वाभिमानी नेपालीलाई मान्य छैन!
हामी नेपालीहरू वीच यो विषयमा कुनै विवाद हुनुहुँदैन र छैन! अहिलेको जल्दोबल्दो प्रश्न जुनसुकै परिवेशमा भए पनि झण्डै साठी बर्षदेखि कालापानीमा रहेको भारतीय सेना त्यहाँबाट कसरी हटाउने र हालसालै त्यो क्षेत्रलाई भारतको नक्सामा समेटिएको विषयलाई कसरी हल गर्ने भन्ने हो!
यसबारे गत कार्तिक २३ गते वालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा हामी सबैले प्र म ओलीलाई भारतीय पक्षसंग उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा वार्ता गरेर कुटनीतिक ढंगले समस्या हल गर्न सुझाव दिएका थियौं! तर त्यसवारे प्र म ले अहिलेसम्म केकसो गर्नुभयो केही वताइएको छैन!
अहिले एक्कासी वहाँले भारतीय फौजलाई फिर्ता जान र नेपाली भूमि खाली गर्न आदेश दिएको जस्तो कुरा संचारमाध्यममा आएको छ! र फेरि एकपटक वहाँको “राष्ट्रवादी” छवीको पारो ह्वात्तै बढेको छ!
सीमा र फौज तैनाती सम्बन्धी विवादको प्रश्न इतिहासमा र संसारभरी सधैं र सबैतिर कि त शान्त र कुशल कुटनीतिको तरिकाले कि त युद्ध र बलप्रयोगको तरिकाले हल हुने गरेको छ! अर्को तेश्रो बाटो छँदैछैन!